सोमबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु भयाे कि ? | नेपाली पब्लिक सोमबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु भयाे कि ? | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, ६ माघ सोमबार १९:१२
१.सभामुखको उम्मेद्वार टुङ्गिएसँगै राजीनामा दिएँ : तुम्वाहाङ्फे
उपसभामुख डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले सभामुखको उम्मेदवारको टुङ्गो लागेसँगै आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत उपसभामुखबाट राजीनामा घोषणा गरेलगत्तै संसदभवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले संविधानले संसद्लाई नेतृत्वविहीन हुने कल्पना नगरेकाले सभामुखको उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै आफूले राजीनामा गरेको बताए।
२.गायिका आस्था राउत प्रहरीको फरार सूचीमा
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गायिका आस्था राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यका अनुसार मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १ सय १८ अनुसार अभद्र व्यवहार कसूरमा राउतविरुद्ध आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।
३.काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य पोखरेलको निधन
प्रदेश ५ का प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य एवं विपक्ष दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको निधन भएको छ। सोमबार दिउँसो आफ्नै निवासमा उनको निधन भएको बताइएको छ। ८२ वर्षीय पोखरेललाई फोक्सोको क्यान्सर थियो। विभिन्न अपतालमा उपचार गराए पनि शरीरका अन्य अङ्गमा संक्रमण फैलिएपछि चिकित्सकले निको हुने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। एक साता देखि उनलाई घरमै राखिएको थियो।
४.पुष्पा भुसाललाई सभामुखमा उमेदवार बनाउने काङ्ग्रेसकाे तयारी
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा सचेतक पुष्पा भुसाललाई उमेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेस शीर्ष तहमा यस बारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा कांग्रेसले उमेदवारी दिएको थिएन। आइतबार नेकपाको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। संसद बैठक आज बस्दैछ।
५.मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबकाे मुख्य प्रायोजकमा नेपाल आयल निगम
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको सर्वाधिक सफल क्लब मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलाई नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले मुख्य प्रायोजन गरेको छ। एक वर्षका लागि भएको सम्झौतामा एनओसीले मनाङलाई ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। एनओसीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल र मनाङका अध्यक्ष छिमि उर्गेन गुरुङले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
६.पर्यटन विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
हाल पर्यटन विभागबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा रहेको गल्ती सेलाउन नपाउँदै पर्यटन विभागको विज्ञप्ति भाइरल बनेकको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले अन्नपूर्ण पदमार्गमा हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका पदयात्री तथा पथप्रदर्शकका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति आइतबार जारी गरेको थियो।
७.नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई उपयोगी जानकारी
1.मोबाइलको ब्यालेन्स थाह पाउँन *400# डायल गर्नुहोस्।
2.आफ्नो मोबाइल नम्बर थाह पाउँन *9# डायल गर्नुहोस्।
3.कल फरवार्ड गर्न **21*98xxxxxxxx फरवार्ड गर्न चाहेको नम्बर# डायल गर्नुहोस्।
4.डाटा प्याक खरिद गर्न *1415*1# डायल गर्नुहोस्।
5.भ्वाइस प्याक खरिद गर्न *1415*4# डायल गर्नुहोस्।
भारतले शक्तिशाली आणविक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। अनेकौँ ढिलाइपछि के–४ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। ३५ सय किमिसम्म मार हान्न सक्ने यो क्षेप्यास्त्र अरिहन्त समूहको पन्डुब्बीबाट प्रहार गर्न मिल्छ। गत अक्टोबरमा नै परीक्षण गर्न खोजिएपनि विविध कारणले यो पछि सरेको थियो।आन्ध्र प्रदेशनजिकै समुद्रबाट आइतबार यो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। चौथो प्रयासपछि परीक्षण सफल भएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मध्ये एक हो।
९.सन् २०३० सम्ममा सिक्स् जी नेटवर्क ल्याउने चीन र जपानकाे तयारी
अहिले विश्वभर नै मोबाइल प्रविधिमा फोरजी चलनचल्तीमा छ तर चीनले आफ्ना ५० वटा भन्दा बढी सहरमा फाइभ जी सेवा विस्तार गरीसकेकाे छ। फाइभ जीको अध्ययन र विकासमा अन्य देशको तुलनामा चिनियाँ कम्पनी निकै अघि देखिएका छन्।फोरजी भन्दा सयौँ गुणा द्रुत हुने दाबी गरिएको फाइभजी अहिले व्यवसायिक रुपमा प्रयोगमा आउने क्रममा छ। आगामी वर्षमा चिनले फाइभजीलाई देशैभर विस्तार गर्ने याेजना बनाएकाे छ। यसै गरि बेलायत, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले पनि केही सीमित सहरमा परीक्षणको रुपमा फाइभजी सेवा सुरु गरेका छन्।
१०.पिसाब पोल्ने समस्याको अचुक औषधी – ‘भुटेको मकै’
भुटेको मकै प्रायः मानिसहरूलाई मन पर्छ। खाजाका रूपमा खाइने भुटेको मकैले मानव स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा पुर्याउने गर्छ। यसमा फाइबरको मात्रा अधिक हुन्छ। जसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। भुटेको मकै खाएमा एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुँदैन। यसमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा पर्याप्त हुने भएकोले शरीरको हड्डी मजबुत बनाउँछ। भुटेको मकैमा भिटामिन बी १२, फोलिक एसिडको मात्र पर्याप्त हुन्छ।
मंगलबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू- छुटाउनु…